I-Adobe Premiere Rush ngoku iyafumaneka kwi-Galaxy S10, S9 kunye neNqaku 9 | I-Androidsis
I-Adobe Premiere Rush sisicelo esitsha ebesijonge phambili kuso kwiifowuni zethu ze-Android kwaye yasungulwa kwi-iOS, iMac kunye nePC kwiinyanga ezisibhozo ezidlulileyo, kanye ngo-Okthobha ophelileyo.
I-Adobe ibonisa ukuba le app ibikhona Iphehlelelwe ngesiseko sokufumana iziphumo zobungcali ngendlela elula kwaye kulula, ukuze nabani na, ngononophelo oluncinci kunye nenjongo, anokwabelana ngevidiyo ezimangalisayo kwiinethiwekhi zentlalo ezisuka kwiselfowuni.
1 Ukudala umxholo wevidiyo esemgangathweni
2 Yonke into esiyinikwa yiAdobe Premiere Rush
Ukudala umxholo wevidiyo esemgangathweni
Ngamanye amagama, iNkulumbuso Rush, ekubeni usetyenziso lwasimahla, nangona lilinganiselwe, Isivumela kwiselfowuni ukuba sibe nezinye izixhobo esiziphosayo kwinguqulelo epheleleyo yeePC ngokwazo nezaziwa yiAdobe Premiere. Ke nge-Premiere Rush ungahlela ividiyo, ukongeza isicatshulwa kunye nokutshintsha kwevidiyo ukwenza iividiyo ezikumgangatho ophezulu kwiscreen sakho esiphathwayo.
Sithetha ngesinye sezona zixhobo zithandwa kakhulu zokuhlela ividiyo kwivenkile ye-iOS, ke kukufika ngokufuthi ukuba ube nakho ukuba nayo kwiselfowuni yethu ye-Android ukusukela namhlanje. I-Adobe ikhuphe mahala, nangona kunjalo kuthintelwe ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kathathu. Emva kwalo mda kuya kufuneka uhambe ngokuBhaliswa kweLifu lokuDala okuthetha ukuhlawulwa kwe- € 9,99 ngenyanga.
Umda we-3 yokuthumela ngaphandle enokufika iluncedo ukuvavanya usetyenziso ngaphakathi kunye nokujonga ukuba ilungele thina konke esinika kona yokuhlawulwa kobhaliso ukuze ube nakho ukwenza ukuthunyelwa ngaphandle okungenamda. Ayisiyonto iqhelekileyo ukwenzeka ngeeapps zeAdobe, kuba ayisiyiyo kuphela ekufuneka udlule kuyo ebhokisini ukuze ukwazi ukonwabela zonke izibonelelo zayo njengoko kunjalo ngeAdobe Lightroom.
Yonke into esiyinikwa yiAdobe Premiere Rush
Njengoko ividiyo ingumxholo wemultimedia esefashonini, iAdobe Premiere Rush inokuba yinto enomdla kuba awudingi nekhompyuter ukwenza imisebenzi elula yokuhlela ividiyo. Sithetha ngento esinokuyenza yongeza utshintsho lwevidiyo, usike iziqeshana, yongeza isandi, urekhode ividiyo kwi-app ngokwayo kwaye ufikelele kuthotho lweefilitha zokubeka inqaku kwezo vidiyo uza kuzipapasha kwiinethiwekhi zakho ozithandayo.
Yonke into yenziwa ngonxibelelwano oluyilelwe ukusebenzisana kwi-smartphone kwaye ngokulula kwenza lula xa kusongezwa ividiyo, ukusika ikliphu okanye ukongeza loo mbhalo kunye iifonti ezahlukeneyo kunye nokuseta okungagqibekanga. Inyani yile yokuba kuyonwabisa ukudlala neAdobe Premiere Rush kwaye isenza ukuba siqale ukucinga ukuba kufanelekile ukuyihlawulela. Ngethamsanqa singasebenzisa ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kathathu ukuvavanya.
Kwaye enyanisweni uya kuba nayo uthotho lweeklip zevidiyo ezilayishwe ngokungagqibekanga, ufakelo lungaphezulu kwama-megabyte angama-400 ... Ngabo ungabona ukuba kulula kangakanani ukuhlela ividiyo ukuze ibe nesixhobo esipheleleyo kwiselfowuni yakho. Siphonononga zonke iimpawu zayo:
Ikhamera edibeneyo yokurekhoda iividiyo ezikumgangatho ophezulu.
Tsala kwaye ulahle imathiriyeli kwingqokelela yevidiyo ngendlela elula.
Sika iividiyo, lungisa iaudiyo, uphucule umbala, yongeza izihloko, utshintsho, ukugquma kwelizwi.
Ixesha levidiyo ye-Multitrack ine-4 iyonke kwividiyo kunye neendlela ezi-3 zomsindo.
Ngaphezulu Iitemplate ze-100 zeMotion Graphics.
Sebenzisa i-AI yeAdobe Sensei ukuzilinganisela ngokuzenzekelayo, ukucoceka nokulungelelanisa isandi.
Guqula ubungakanani kunye ukuqhelaniswa nevidiyo.
Yongeza umfanekiso we-thumbnail.
Ishedyuli yezithuba kwi-Instagram, Facebook, nakuYouTube.
I-Adobe Premiere Rush okwangoku ihleli kuphela kwi-Galaxy S9, S10 kunye neNqaku 9 kwaye kulindeleke ukuba i-Samsung iyigqithisele kwezinye iiterminal kungekudala. Umhleli wevidiyo ekumgangatho ophezulu wokudala kunye nokuhlela iividiyo naphi na ngaphandle kwesidingo sekhompyuter. Inkqubela phambili ye-Android kwaye unokufumaneka ukusukela namhlanje.
I-Adobe Premiere Rush-Umhleli weVidiyo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Adobe isungula iNkulumbuso yeRush ukuze wenze kwaye wenze ubuqu iividiyo njengangaphambili